Diyaaradaha gaarka loo leeyahay ee loo yaqaan 'Premier Private Jets' waxay ka helaan Oakland Air FBO garoonka diyaaradaha caalamiga ee Oakland County
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Aviation » Diyaaradaha gaarka loo leeyahay ee loo yaqaan 'Premier Private Jets' waxay ka helaan Oakland Air FBO garoonka diyaaradaha caalamiga ee Oakland County
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Investments • News • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Gaadiidka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
La wareegitaanku wuxuu keenayaa maraakiibta Premier ee 14 isla markaana si weyn u ballaarineysa awooddooda fagaaraha dayactirka
Oakland Air waa adeeg buuxa oo FBO ah, kireynta hawada iyo xarun dayactir oo la xaqiijiyay oo ku taal garoonka diyaaradaha caalamiga ee degmada Oakland
Xarunta PTK waxaa dib loo bixin doonaa magacii hore 'Premier Jet Services'
Gelitaanka Premier ee fagaaraha FBO wuxuu u oggolaanayaa iyaga inay si wanaagsan u maareeyaan iibsashada shidaalka iyo dayactirka dayaaradaha dayactirka habeenkii
Premier Private Jets, shirkad qeyb ka ah heshiiska kirada hawada oo qayb ka ah 135 oo xarunteedu tahay Stuart, FL, ayaa heshay Oakland Air, adeeg buuxa oo FBO ah, cahdi hawadeed iyo xarun dayactir oo la xaqiijiyay Gegada Diyaaradaha Caalamiga ee Gobolka Oakland. La wareegitaanku wuxuu keenayaa maraakiibta Premier ee 14 isla markaana si weyn u ballaarineysa awooddooda fagaaraha dayactirka. Xarunta PTK waxaa dib loo bixin doonaa magacii hore 'Premier Jet Services'.
Josh Birmingham, Madaxa Fulinta ee shirkadda ayaa yidhi "Aad ayaan ugu faraxsanahay helitaankan weyn, kii ugu horeeyey ee aan rajaynayno inay dhacaan markaynu balaadhino raadka Premier ee dalka oo dhan." Diyaaradaha Gaarka loo Leeyahay ee Premier. La soo wareegistani waxay ballaarin doontaa 'doonyaha sabeynaya' ee diyaaradaha fudfudud iyo kuwa dhexdhexaadka ah ee dhammaan bariga Mareykanka. Waxaan aaminsanahay inaan ku bixin karno adeeg macmiil ka qiimo jaban anagoo ka helayna howlaha muhiimka ah howlaheena, tanina waa tan ugu horeysa ee talaabooyin badan oo aan qaadi doonno markaan sii kordhineyno qaabkan ganacsi ee xiisaha iyo balaarinta leh. ”
Gelitaanka Premier ee fagaaraha FBO wuxuu u oggolaanayaa iyaga inay si wanaagsan u maareeyaan iibsashada shidaalka iyo dayactirka dayaaradaha dayactirka habeenkii. Diyaaraduhu waxay ku saleysan yihiin goobo istiraatiiji ah oo ku yaal garoomada diyaaradaha oo lala bartilmaameedsado safar ganacsi iyo xilli firaaqo ah, Premier wuxuu bixiyaa jawaab deg deg ah jadwalka macaamiisha waxayna ku bixisaa qiimeyn tartan iyadoo loo marayo waxtarka qiimaha.
"Nooca Fet Premier Jet Services FBO wuxuu hadda na siinayaa fursad aan si buuxda ugu xakameyno qibradeynta heshiiska duullimaadka macaamiisha laga soo bilaabo dhulka," ayay tiri Birmingham. "Waxaan rajeyneynaa inaan helno FBO dheeraad ah waxaanan hadda dooneynaa fursado cusub."
Marka lagu daro taageerida howlgalada diyaaradaha gaarka loo leeyahay ee loo yaqaan 'Premier Private Jets', FBO-da cusub ee la soo helay ayaa la ballaarin doonaa si loo soo jiito milkiilayaasha diyaaradaha gaarka loo leeyahay iyo hawl wadeenada saddexaad ee Pontiac iyo nawaaxigeeda. Shirkaddu waxay qorsheyneysaa inay casriyeeyso tas-hiilaadkeeda rakaabka ee PTK oo ay kujirto dhammaan lobbiyada cusub, oo lagu dhameystiray nidaam sifeyn hawo casri ah oo awood u leh inay difaacdo fayrasyada sida COVID-19. "Aad ayaan ugu faraxsanahay qorshayaasheena ah in aan dhisno FBO heer caalami ah, oo lagu dhameystirayo diyaaradda duulimaadka iyo jikada kafateeriyada, iyo sidoo kale in aan noqdo kii ugu horreeyay ee siiya shidaalka duulimaadka (SAF) dhammaan diyaaradaha isticmaala garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Oakland County," Birmingham ayaa soo gabagabeysay.